यस्तो छ पानी पिउने सही तरिका, कुन समयमा पिउँदा कस्तो फाइदा हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् — Sanchar Kendra
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दिनमा ८ देखि ९ गिलास पिउनुपर्छ । पानीले शरीरमा भएको विषालु पदार्थहरूलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ । नियमित भरपुर पानी पिउँदा विभिन्न प्रकारका रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
पानी पिउने सही तरिका के हो ? कुन समयमा पानी पिउदा कस्तो फाइदा ?